MPONIN’AMBOHITRIMANJAKA: Tsy manaiky ny fiakaran’ny saran-dalana ho 700 ariary | Madatopinfo
Nanatanteraka hetsika ho fanoherana ny fisondrotan’ny saran-dalana ho 700 ariary ny mponina eny Ambotrimanjaka ny sabotsy 16 martsa lasa teo nanoloana ny biraon’ny Kaominina teny an-toerana. Nentin’izy ireo nanehoana ny tsy fankasitrahan’izy ireo izany ny filanjana sora-baventy sy ny fitsofana kiririoka manerana ny tanàna. “Koperativa tsy mijinjo vahoaka”, “koperativam-pianakaviana ampy izay” , “aza atao tsinontsinona izahay mpanjifa” ireo no ankamaroan’ny sora-baventy hita nandritra ny hetsiky ny mponina.
“Tsy zakan’ny fahefa-mividin’ny vahokan’Ambohitrimanjaka ny saran-dalana 700 ariary, tolotra izay tsy mifanaraka amin’ny kalitao ihany koa ny omena ho an’ny mpanjifa”, hoy i Volakanto mponin’Ambohitrimanjaka. Raha 500 ariary ny saran-dalana teo aloha, niakatra 40 isan-jato izany amin’izao fotoana izao. Araka ny fanampim-panazavana hatrany, miisa efatra ny koperativa miasa eny an-toerana saingy ny iray amin’ireo ihany no tsy manaiky io saran-dalana 700 ariary. Raha ny fantatra, efa nisy ny fivoriana natao saingy tsy nahitam-bokany izany ka niafara tamin’ity fihetsiketsehana ity. Araka ny tatitra, efa nisy ihany koa ny fihaonan’ny solotenan’ny mpanjifa sy ireo koperativa efatra niaraka tamin’ny ATT ka nisy ny marimaritra iraisana tamin’izany ka 600 ariary ny saran-dalana mampitohy an’ny 67 Ha hatrany Ambodivona Ambohitrimanjaka fa izay koperativa tsy manaiky izany kosa dia tsy mahazo miasa eny.
Vahaolana maharitra aroson’ny mponina ho an’ny Fitondram-panjakana ny hanamboarana ny lalana manomboka eny amin’ny mpivarotra taozavatra malagasy hatreny amin’ny tetezana Ambohitrimanjaka. Ny hampidirana koperativa vaovao hafa ihany koa anisan’ny vahaolana haingana takian’ny vahoaka. Mbola andrasana hatreto izay tohin’ny fihetsiketsehana mikasika io tsy faneken’ny vahoaka ny fisotrotan’ny sarandalana io.
ADY AMIN’NY HERISETRA: Hiara-hientana ny Ecpat France sy ny mpanao gazety
FIANTOHANA M.A.MA : Nisokatra ny zoma lasa teo eny Andohatapenaka ny masoivohony vaovao
FANDAHARAN’ASA “TSAIKY”: Fitaovana iray hiarovana ny ankizy Malagasy amin’ny herisetra isan-karazany
FANEDUCATION AGENCY: Manamora ny fiatrehan’ny tanora hanohy fianarana any ivelany
ZOTRA REZIONALY: Ho hentitra ny fanaraha-maso ny “taxi-brousse” rehetra
MPIANATRY NY ESTIIM': Nizara fanomezana ho an’ny fianakaviamben’ny AKA.MA 67Ha